ဓူဝံကြယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အာရှာမိုင်နာ ကြယ်စုတနရှိ အတောက်ပဆုံးကြယ်
ကိုဩဒိနိတ်: 02h 31m 48.7s, +89° 15′ 51″
ဓူဝံကြယ် (အင်္ဂလိပ်: Polaris) ကို အယ်လ်ဖာ ယူမီ (α UMi)၊ အယ်လ်ဖာ အာဆာမိုင်နောရစ် (α Ursae Minoris) စသော အမည်များဖြင့် ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုကြပြီး အများအားဖြင့် မြောက်ဘက်ကြယ် (Northern Star) သို့ ဝင်ရိုးစွန်းကြယ်(Pole Star) စသည့် အမည်များဖြင့် လူသိများကာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လမ်းပြကြယ် (Lodestar) ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဓူဝံကြယ်သည် အာရှာ မိုင်နာ (Ursa Minor) ကြယ်အစုအဝေးတွင် အတောက်ပဆုံးကြယ်ဖြစ်သည်။ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကောင်းကင်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးကြယ်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကြယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
ဓူဝံကြယ်အား ဟာဘယ် အာကာသတယ်လီစကုပ်မှ မြင်ရပုံ
ကြယ်စုတန်း အာရှာ မိုင်နာ
ညာဘက်တိမ်းစောင်းမှု 02° 31′ 49.09″
နိမ့်ဆင်းမှု +89° 15′ 50.8″
မြင်သာသောအရွယ်အစား (V) 1.98v
မြင်သာသောအရွယ်အစား (V) ၉.၂
ညာဘက်တိမ်းစောင်းမှု 02° 30′ 41.63″
နိမ့်ဆင်းမှု +89° 15′ 38.1″
မြင်သာသောအရွယ်အစား (V) 8.7
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) -၁၇ km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: 44.48±0.11 mas/yr
Dec.: -11.85±0.13 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) ၇.၅၄ ± ၀.၁၁ mas
အကွာအဝေး 325 - 425i ly
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) -3.6(α UMi Aa)
ပင်မ α UMi Aa
အဖော် α UMi Ab
ပတ်လမ်းကြာချိန် (P) ၂၉.၅၉ နှစ်
ဆီမီး-မေဂျာ ဝင်ရိုး (a) ၀.၁၃၃"
စက်ဝိုင်းပုံပတ်လမ်း (e) ၀.၆၀၈
နိမ့်ဆင်းမှု (i) ၁၂၈°
ဆုံမှတ်၏လောင်တီကျု (Ω) ၁၉°
(primary) ၃.၇၂ km/s
ဒြပ်ထု ၄.၅ M☉
အချင်းဝက် 46±3 R☉
တောက်ပမှု (bolometric) 2500 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား(log g) ၂.၂ cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 6015 K
သတ္တုကြွယ်ဝမှု 112% solar
စတီလာ လှည့်ပတ်မှု ၁၁၉ ရက်
လှည့်ပတ်အလျင် (v sin i) 14 km/s
စတီလာ သက်တမ်း 7×10၇ years
ဒြပ်ထု ၁.၂၆ M☉
အချင်းဝက် ၁.၀၄ R☉
တောက်ပမှု (bolometric)3L☉
ဒြပ်ထု ၁.၃၉ M☉
အချင်းဝက် ၁.၃၈ R☉
တောက်ပမှု (bolometric) 3.9 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား (log g) 4.3 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 6900 K
လှည့်ပတ်အရှိန် (v sin i) 110 km/s
သက်တမ်း 7×10၇ years
တည်နေရာ (တူရုပြုသည် α UMi Aa)
ပါဝင်မှု α UMi Ab
တည်နေရာ ထောင့် 231.4°
ပါဝင်မှု α UMi B
တည်နေရာ ထောင့် 230.540°
ဓူဝံကြယ် ကို မြောက်အရပ်ညွန်ပြရာ ကြယ်ဟု အများသိကြသော ခုနှစ်စင်ကြယ် အသေး၏ အတောက်ပဆုံး ကြယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း ဓူဝံကြယ်သည် ကမ္ဘာ၏ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း တွင် တည်ရှိပြီး မြောက်အရပ်ကို အမြဲ ညွန်ပြပေးသည်။
ဓူဝံကြယ်သည် ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် ၄၃၀ ခန့်ကွာဝေးသည်။ ၎င်းသည် ကြယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ ကြယ်စု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် နေဒြပ်ထု ၏ခြောက်ဆ ရှိသော F7 အလင်းရောင် အဆင့်ရှိ α UMi A ကြယ်သည် supergiant တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြယ်ငယ်နှစ်ခုမှာ နေထုထည်၏ ၁.၅ ဆရှိ သော α UMi B နှင့် α UMi Ab တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် ခွဲထွက်နေသော UMi C နှင့် UMi D လည်းပါရှိသည်။ မကြာသေးမှီကမှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ဓူဝံကြယ်သည် A နှင့်F ကြယ်အမျိုးအစားရှိ မပီပြင်သော open cluster အနွယ်ဝင်ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ ၁.၁၃ ၁.၁၄ ၁.၁၅ ၁.၁၆ "Direct Detection of the Close Companion of Polaris with Thehubble Space Telescope" (2008). The Astronomical Journal 136 (3): 1137. doi:10.1088/0004-6256/136/3/1137. Bibcode: 2008AJ....136.1137E.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ "Precise Radial Velocities of Polaris: Detection of Amplitude Growth" (2008). The Astronomical Journal 135 (6): 2240. doi:10.1088/0004-6256/135/6/2240. Bibcode: 2008AJ....135.2240L.
↑ "VizieR Online Data Catalog: General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007–2013)" (2009). VizieR On-line Data Catalog: B/gcvs. Originally published in: 2009yCat....102025S 1: 02025. Bibcode: 2009yCat....102025S.
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ ၄.၅ ၄.၆ ၄.၇ "Polaris B, an optical companion of the Polaris (α UMi) system: Atmospheric parameters, chemical composition, distance and mass" (2008). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 387: L1. doi:10.1111/j.1745-3933.2008.00426.x. Bibcode: 2008MNRAS.387L...1U.
↑ "The period and amplitude changes of Polaris (α UMi) from 2003 to 2007 measured with SMEI" (2008). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: –. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13439.x. Bibcode: 2008MNRAS.388.1239S.
↑ "Polaris, the nearest Cepheid in the Galaxy: Atmosphere parameters, reddening and chemical composition" (2005). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 362 (4): 1219. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09353.x. Bibcode: 2005MNRAS.362.1219U.
↑ "Catalogue of [Fe/H] determinations for FGK stars: 2001 edition" (2001). Astronomy and Astrophysics 373: 159. doi:10.1051/0004-6361:20010525. Bibcode: 2001A&A...373..159C.
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ "Polaris: astrometric orbit, position, and proper motion" . Bibcode: 2000A&A...360..399W.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဓူဝံကြယ်&oldid=721251" မှ ရယူရန်
၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။